103 Sano ka dib markii ugu horeeysay Taariikhda kooxda Borussia Dortmund oo isku darsatay Koobkii Jarmalka & Horyaalkii dalkaas - iftineducation.com
103 Sano ka dib markii ugu horeeysay Taariikhda kooxda Borussia Dortmund oo isku darsatay Koobkii Jarmalka & Horyaalkii dalkaas
iftineducation.com – Kooxda Kubada Cagta ee Borussia Dortmund ayaa markii ugu horeeysay mudo 103 sano ah oo ay jirtay waxay isku darsatay Koobkii Dalka Germany ee DFB-Pokal iyo Horyaalka Bundesliga. Borussia Dortmund ayaa kulan Final ah oo aad u adkaa waxay 5-2 ku suul daareen kooxda heeysata Iskoorka ugu badan ee koobka dalka Germany waa Fc Bayer München.
Ciyaartaan oo ka dhacday Garoonka Berliner Olympia-Stadium oo ku yaal caasimada Berlin ee dalka Germany waxaa Goolasha kooxda Borussia Dortmund 3 ka mid ah u saxiixay weeraryahanka Qaranka Poland Robert Lewandowski daqiiqadihii 45-aad, 58-aad iyo 82-aad. Labada Gool ee kale waxaa kala raacsaday Difaaca Qaranka Jarmalka Mate Hummels oo Rigoore dhaliyay iyo Xiddiga Qaranka Japan Sinji Kagawa oo bilowgii Ciyaarta Daqiiqadii 3-aad Gool kaga naxsaday kooxda Fc Bayern Munchen .
Labada Gool kooxda Fc Bayern München waxaa u kala saxiixay Arjen Robben oo Rigoore lagu galay Mario Gomez dhaliyay iyo Frank Bilal Ribery oo Gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa Fc Bayern Munchen. Kooxda Bayern Munchen 16 jeer ayay timid Fiinaalka koobka DFB-Pokal ee dalka Germany waxaana laga qaaday 2 jeer oo kaliyah.
Dhanka kooxda Borussia Dortmund waa markeedii 3-aad oo ay qaadeen koobka dalka Germany balse waa markii ugu horeeysay Taariikh ahaan oo ay isku darsadaan Horyaalka Bundesliga iyo koobka DFB-Pokal. Kooxda Borussia Dortmund oo xili Ciyaareedkaan wadata Laaciibiin yar yar waxay naadiga Fc Bayern Munchen iskaga dhiciyeen waxa loo yaqaan Koontada & Pasas cajiib ah.
Intii ay Ciyaarta socotay Garoonka waxaa ka dhacday Qiso Cajiib ah ka dib markii uu Roman Weidenfeller oo ah Goolhayaha labaad ee Qaranka Jarmalka una ciyaara kooxda Borussia Dortmund uu dhaawac ka soo gaaray Kalyaha daqiiqadii 31-aad mar ay isku dhaceen Weeraryahan Mario Gomez.
Goolhaye Roman Weidenfeller daqiiqadii 35-aad ayaa Ciyaarta laga soo saaray isaga oo heeysta Kalyaha waxaana loo qaaday dhanka Isbitaalka. Goolhayahaan oo Saacad ka dib isaga oo ordaya soo galay Garoonka wuxuu durbadiiba la dabaaldegay kooxdiisa oo koobka qaaday waxeeyna kula dhaqaaqeen Shumis Xiddigaan oo la sheegay in Kabaabiso looga soo daaweeyay Xanuunkii Isbitaalka loogu qaaday ee ahaa dhanka Kalyaha.
Sidoo kale waxaa dadka ka yaabsaday markii ay Ciyaarta dhamaatay Ciyaaryahan Gündogan oo u safta kooxda Borussia Dortmund iyo Qaranka Germany ka dib markii uu soo qaatay ama isku soo toshay Calamada dalalka Turkiga iyo Jarmalka. Xiddigaan oo qadka dhexe aad ugu wanaagsan dhawaan ayaa lagu soo daray Qaranka Germany waana Laacib u dhashay asal ahaan dalka Turkiga.
Macalinka kooxda Manchester Utd Sir Alexander Chapman Ferguson wuxuu fadhiyay Garoonka wuxuuna aad uga helay Laacibka Qaranka Japan iyo kooxda Borussia Dortmund Shinji Kagawa oo ku sii jeeda dhanka kooxda Man Utd. Waxaa sidoo kale Fiinaalka koobkaan soo xaadirtay Haweeneeyda Raisulwasaaraha ka ah dalka Germany Angela Merkel iyo Macalinka Qaranka Germany Mr.Jochum Löw.
KOOXAHA BORUSSIA DORTMUND VS FC BAYERN MUNCHEN AYAA QAABKAAN ISKU ARKAY :
Dortmund: Weidenfeller (35./Langerak) – Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer – Gündogan, Kehl – Blaszczykowski (84./Perisic), Kagawa (81./Bender), Großkreutz – Lewandowski.
Bayern: Neuer – Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba (69./Contento) – Schweinsteiger, Gustavo (46./Müller) – Robben, Kroos, Ribery – Gomez.
Horyaalka dalka Turkiga waxaa markeedii 18-aad inta Taariikhda la ogyahay Jeebka gashatay kooxda Galatasaray oo hal dhibic uga qaaday kulan Derbi ahaa kooxda ay sida weeyn isku neceb yihiin ee Fenerbahce Istanbul.
Ciyaartii labada dhinac dhex martay oo 0-0 ku dhamaatay waxaa mar qura Garoonkii ku soo dhex yaacay Taageerayaasha kooxda Fenerbahce oo qas raaxada uga qaaday Ciidamada Booliiska kuwaas oo Biyo kulul lagu furay ila dib looga celiyay Garoonkii ay soo dhex galeen .
Macalin Fatih Terim oo xili Ciyaareedkaan kooxda Galatasaray aad u soo dhisay wuxuu Taageerayaasha kooxdaas oo isku soo baxay kula dabaal degay magaalada Istanbul gaar ahaan halka loo yaqaan Taksim-Platz.
Goob Xaflad Aroos kasocotay oo isku badashay Tacsi geeri ah iyo Ooyin iyo lama arag iyo lama maqal(Talow Maxaa Dhacay)